Jooji Qorista Mashiinnada Goobista | Martech Zone
Arbacada, Maarso 21, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Template-kayga WordPress ayaa lagu hagaajiyay Mashiinnada Raadinta. Waxaan si taxaddar leh u qaabeeyey shaxdayda anigoo waxbadan ka bartay talooyin aan ka helay dad aad u tiro yar. Wax kasta oo ka soo baxa cinwaanada bogga illaa tags ayaa loo rogay si loo cadaadiyo inta aan kari karo.
Wax ka-hagaajinta shaashadda qormadayda 'blog' ayaa shaqeysa - ku dhowaad 50% ka mid ah booqdayaashaydu waxay ku yimaadaan habka Mashiinka Raadinta, ugu horreyn Google. In kasta oo qoraalkaygu ku fiicanyahay Mashiinnada Raadinta, SEO khubaradu waxay ogaan doonaan in qoraalladaydu aysan ahayn.
Kuma soo celiyo cinwaankeyga jumladokeyga uguhoreeya. Uma isticmaalo tan xiriiriyeyaal qoraalladeyda. Inta badan iskuma xidho qoraalladayda mooyee haddii aan si dhab ah qaraabo u ahayn. Markuu akhriyay tan oo ah SEO maqaallada, waxaan qori karaa liistada hubinta ee waxyaabaha aan anigu waa in ku samee qoraal kasta.
Ma yeeli doono maxaa yeelay uma qorayo Mashiinnada Raadinta, waxaan u qorayaa akhristayaasha. Waxay u muuqataa mid aan daacad ahayn in la beddelo qaabka wadahadalkeyga si markaa qaar ka mid ah barnaamijyada software-ka ah ee ku jira gurguurta webka qaarkood ay u jiitaan macluumaadkeyga isla markaana ay u muujiyaan maqaalladayda raadinta ereyga muhiimka ah. Waxba igama gelin haddii mashiinka raadinta uu si fudud ii heli karo
Tan iyo markii aan aqriyay qodobbadaas in muddo ah, runtii waan ogaan karaa goorta qorayaasha kale ay sameynayaan. Kaliya waa digniin ku socota qorayaasha - I ka bood aqriska wax badan oo ka mid ah qoraaladaada darteed. Mararka qaar, xitaa waan joojiyaa qorista.
Qaab kale oo loogu sheego dadka wax qora ee wax qora ayaa ah kuwa ay ka faaloodaan… waxaad u muuqataa inaad aragto faallooyin kala duwan toddobaad kasta oo aad aadeyso boggooda. Wadahadal malahan… kaliya faalo halkan iyo halkaas aqristayaashana waligood soo laaban. Xaqiiqdii waan ku raaxaystaa inaan arko isla dadkaas oo ku soo noqnoqonaya boggeyga marar badan. Waxaan ku weynaaday inaan saaxiibo la noqdo inbadan oo kamid ah dadka i soo booqda - inkasta oo aanan waligey shaqsiyan la kulmin.
Kuwa idinka mid ah ee ku abtirsada suuqgeynta tooska ah waxay ogyihiin in cilmi baarista ku saabsan shey kasta ay kuu sheegeyso inay ka adag tahay helitaanka akhristayaal cusub halkii ay ku sii hayn lahaayeen kuwa jira. Waa istaraatiijiyad is-jabis ah markaad wax qorto si aad u dhisto meelaynta Mashiinka Raadinta laakiin akhristayaashaadu kuma raaxaystaan ​​ama kuma dhagaan bartaada. Waa inaad sii wanaajisaa oo aad sii wadataa jibbaarada si aad uga kasbato hits badan Makiinadaha Raadinta.
Ha u qorin Makiinadaha Raadinta. U qor akhristayaashaada.
Xatooyada Shisheeye ee Phishers
waad ku mahadsantahay miyir qabka 🙂
mararka qaarkood dadaalkeena meelaynta waxaan umuuqnaa inaan ilaaway inay runti jiraan aqristayaal halkaas jooga.
Marar badan iskuma xidho qoraalo ii gaar ah mooyee haddii aysan run ahaan ehel ahayn.
Marnaba kuma xirna fariimahayga. Taasi waa sababta oo ah waqtiga intiisa badan, qoraalladaydu uma muuqdaan kuwo is-raacaya. Badanaa waxay ku saabsan yihiin mowduuca xilligan, iyaga oo aan wax xiriir ah la lahayn (ama wax yar, haddii ay jiraan) qoraalo hore.
Apr 2, 2007 at 3: 25 PM
Waxaan bilaabay baloog waxaanan u maleynayay inaan sameynayo wax aad u badan, qor si aan u helo safafka bogagga iyo wixii la mid ah, ka dib markii aan bilaabay qorista, waxay ila noqotay inaanan aniga ahayn… Maxaa yeelay ma ahayn! Waxaan markaa dhahay haddii aan sameyn lahaa waxay ku xirnaan laheyd shuruudaheyga oo majiraan kuwa kale. Waxaan kaliya blog gareynayay muddo bil ah waxaanan jeclahay xaqiiqda ah inaan dhisayo xiriiro ee aanan xiriirin!
Apr 2, 2007 at 4: 37 PM
Mahadsanid, Latimer! Waxaan kudhamaaday bloggaaga (waxaan u maleynayaa inaan saaxiib wadaag nahay - JD Madoow Ganacsi. Balooggaaga ayaa loo qoraa si aad ufiican fully waxaad taabaneysaa dhowr mowduuc oo runtii qarxa, laakiin waxaad si xushmad leh u bixineysaa dhinacaaga doodda oo waxaad uga tagaysaa mawduuca inuu u furnaado dood.
Waxaan aqriyay maqaallo badan oo ku saabsan barta internetka ee ku saabsan waxaad adigu tahay waa in Waxaan sameynayaa… oo runtiina waxaan u maleynayaa in badankood ay tahay BS Waa wax badan sida inaad qof u sheegto sida ay tahay waa in wadahadal la yeelo qof aadan aqoon.
Waad ku mahadsan tahay joojinta iyo faallooyinka!
Apr 2, 2007 at 5: 11 PM
Waad ku mahadsan tahay joojinta Doug, sida aan ku iri barteyda marwalba waan u furnahay inaan maqlo fikradaha oo dhan waxaanna ku yeelan karnaa doodo caqli ku saabsan arrin kasta. Mar labaad waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga.
Apr 3, 2007 at 3: 29 PM
Waxaan kaliya rabay inaan kuusoo wargaliyo inaan runtii aad ugu riyaaqay waxaad kuleedahay qoraalkan Waxaan bilaabay boggeyga waxyar bil ka hor waxaanan si joogto ah u baranayaa sida loo sameeyo sheygan, markaa taladaadu runtii way caawinaysaa maxaa yeelay way run tahay. In kasta oo si dhib yar aan daqiiqaddan ku jiray, haddana waa inaan la dagaallamo jirrabka ah inaan sameeyo Wax kastoo kor u qaadaya tirada. Waxay u egtahay qabatinka daroogada ama wax uun, ma ogtahay? Akhristayaal BADAN, waa inaan si fudud u haystaa AKHRISTE.
Laakiin hadda waan aqriyay qoraalkaaga wax walbana way igu soo noqonayaan, sida codkaas yar ee maskaxda loogu haysto dhabarka maskaxdayda. Midka ciqaabta macno samaynaya. Ku hadal waxaad taqaanid, u hadal sidaad u tidhi oo way iman doonaan.
Raaligelin, dabcan, "Goobta Riyooyin".
Apr 3, 2007 at 5: 08 PM
Mahadsanid, Keith. Waxaan u maleynayaa in qof walba (xitaa ka baxsan barta internetka) uu raadinayo aqoonsi. Waxaan sidoo kale is arkaa aniga oo qoraya mararka qaar isweydiinta sida ay u saameyn doonto SEO-ga, xiriiriyeyaasha, diggs, iwm. Mid ka mid ah sababihii aan u qoray qoraalkan waxay ahayd inaan sii wado aniga qudhaydu safka sidoo kale!
Apr 3, 2007 at 5: 53 PM
Qoraal wanaagsan. Waxaan isku dayaa inaanan wax u qorin matoorada raadinta, laakiin waa inaan qiraa inaan ka fikiro. Cinwaannada qoraalladayda qaarkood (haddii ay la xiriirto dhacdo weyn), ereygu waa sidaas si ay u soo qaadaan mashiinnada raadinta. Sidaan uma sameynayo sidaas darteed waxaan ku lahaan karaa tiro badan oo soo booqda goobta (waxaan hayaa habab kale oo aan ku quudinayo maskaxdayda). Waxaan u sameeyaa sababtoo ah waxaan rabaa inay dadku akhriyaan waxa aan leeyahay. Waxaan rajeynayaa inay soo noqon doonaan oo ay kaqeyb qaadan doonaan dooda. Blogging waa xiiso leh. Waxaan la kulmaa dad waaweyn oo waxbadan ka barto howsha.
Apr 3, 2007 at 9: 40 PM
Rumayso ama ha rumaysan, runti waad u qori kartaa matoorada raadinta IYO akhristayaashaada.
Waxaan jecelahay inaan ka fikiro labadaba / iyo halkii aan ka noqon lahaa midkood / ama.
Apr 3, 2007 at 9: 59 PM
Fursad kasta oo aan kugula tartami karo si aad u bixiso banaanbax noocan oo kale ah? Shaki iigama jiro inaysan macquul aheyn - waxaan u maleynayaa inay jiraan siyaabo labadaba loo sameeyo. Si kastaba ha noqotee, ma aqoonsan karo wax tusaalooyin ah. (Malaha taasi waa sababta oo ah qoraagu wuxuu qabtay shaqo wanaagsan oo ah adeegsiga labada farsamaba.)
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko qoraal aan kala sooc lahayn oo si fiican loo qoray oo aan isbarbar dhigo qoraal si fiican loo qoray IYO waxay u adeegsataa farsamooyin Mashiinnada Goobista.
Apr 4, 2007 at 7: 49 AM
Khatarta ah inaan dhawaaqo gebi ahaanba is-hambalyeyn, waa kan gabal aan abuuray oo helaya taraafikada mashiinka raadinta wanaagsan iyo mid ka mid ah akhristayaasha joogtada ah ay sidoo kale ku riyaaqeen:
Xeerarka Jawhar-Cabasho La'aan-Cabasho: Miyaad ku dhegsan tahay iyaga?
Waxaan haystaa inyar oo sidan oo kale ah - Ilaah uun baa ammaanta leh!
In kasta oo aan qirto waan ogahay waxa aad ujeedo - mararka qaar waxaan ujecelyahay SEO marka loo eego aqristayaashayda joogtada ah, laakiin waan ku faraxsanahay akhristayaashayda joogtada ah inay wali dib u soo noqdaan maxaa yeelay way i jecel yihiin
Waa sidii aan ula joogo Ilker Yoldas 'TheThinkingBlog.com: Keliya waan sii wadaa aqrintiisa maxaa yeelay waan jeclahay isaga, sidaa darteed wuxuu qori karaa SEO walina waxaan u joogi lahaa aqriskiisa joogtada ah!
Ka taxaddar oo mahadnaq jawaabtaada,
Apr 4, 2007 at 10: 10 AM
Mahadsanid, Paula. Waxaan rajeynayaa, inaad tan u qaadatid sida saxda ah - laakiin waxaan u maleynayaa inaad ku caawisay inaad dhab ahaantii taageerto ujeedadayda. Xusuustaada "jijin aan ka cabanaynin" dhowr jeer sadarrada ugu horreeya run uma dhawaaqayso - waxay u akhrinaysaa sida SEO ay ahayd mudnaanta halkii aad adigu ila hadlaysay.
Qoraalku waa mid weyn, fadlan ha i marin dariiq khaldan. Laakiin 5 sano gudahood markay matoorada raadinta faafinayaan xogta la mariyo iyadoon loo baahnayn in wax loo qoro - tani ma waxay noqonaysaa qaab dabiici ah oo lagu qoro farriin?
Si layaab leh, ayaan u tegey qoraalkan ku saabsan fekerka Blog sadarka horena wuxuu leeyahay 21 xiriiriyeyaal mahadnaq ah oo ku jira si qoto dheer ugu xirnaanta boggiisa. Xidhiidhadaas ayaa loogu talagalay makiinadaha raadinta, maahan adiga iyo aniga.
Iyada oo dhammaan ixtiraam la siiyo!
Apr 4, 2007 at 10: 14 AM
Dambi looma qaban; waad ku mahadsantahay aqrinta qoraalkayga.
Iyo haa, dabcan sidaas ma aanan yeeli doonin ku celi oo ku dhiirado weedho SEO muhiim ah hadaanan rabin dadka inay helaan.
Hoog, waa tan nolosha SEO'er…
Waxaan la yaabanahay sida ciyaarta SEO-Google oo dhan ay isu beddeli doonto mustaqbalka.
Waa inay noqotaa safar xiiso leh…
Apr 4, 2007 at 10: 23 AM
Haye! Laba-whew! Mahadsanid Paula.
Jan 23, 2008 saacadu markay ahayd 4:20 PM
Kaliya aqriso qoraalkan iyo sida ugu habboon. Waxaan ka baxay kulan usbuucii la soo dhaafay kaas oo nin jaallahay ah uu ugu jawaabey hadal been abuur ah oo ku saabsan in websaydhkeenu aanu saaxiibtinnimo u lahayn akhristayaasha isagoo leh “bogaggan ma aha kuwa akhristayaasha Boggan waxaa loogu talagalay matoorada raadinta ”. Waxay iga dhigtay inaan xoqdo madaxeyga oo aan aad ugu dhaadhacnay dariiqa ugu fiicnaanta ee qof dhab ahaantii doorbido in bogagga uusan akhrin bini'aadamka. Maskaxdayda. Adkee inta aad kari karto adigoo abuuraya waxyaabo macluumaad ku dheehan tahay waxay umuuqdaan fikrad shisheeye. Looma baahna in la sheego, waxaan u diray qoraalkan dhowr qof oo ka tirsan shirkaddayda.